शिरिषले जिते ८ औं ओपन वाटर च्याम्पियनशिप, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
शिरिषले जिते ८ औं ओपन वाटर च्याम्पियनशिप
काठमाडौं । ओलम्पियन शिरिष गुरुङ्गले पोखराको फेवातालमा सम्पन्न ८ औं ओपन वाटर स्विमिङ्ग च्याम्पियनसिप २०१८ जितेका छन् । उनले २.५ कि.मि.को दुरी २१ मिनट ३२.६७ सेकेन्डमा पुरा गरे ।
गुरुङ्गले नगद २५ हजार सहित मेडल र प्रमाण पत्र प्राप्त गरे । गुरुङ्गले पाँचौं र छैटौं संस्करण पनि जितेका थिए । यस अघिको संस्करण एपिएफका देवेश मानन्धरले जितेका थिए ।
नेपाल पौडी संघको आयोजनमा फेवातालस्थित बाराही घाटमा भएको च्याम्पियनसिपमा वेदज्ञराज जोशी २१ मिनट ३८.३१ सेकेन्ड समयका साथ दोश्रो भए । उनले नगद १५ हजार सहित मेडल तथा प्रमाण पत्र प्राप्त गरे ।
तेश्रो स्थानमा अविरल भंडारी रहे । उनले २१ मिनट ४२.३१ सेकेन्ड समय खर्चे । भंडारीले नगद १० हजार सहित प्रमाण पत्र र मेडल प्राप्त गरे ।
महिला तर्फको प्रतिस्पर्धामा उपास्ती महर्जनले २२ मिनट ३३.३५ सेकेन्ड समय खर्च गर्दै स्वर्ण हात पारिन् । उनले नगद १५ हजार प्राप्त गरिन् । यसैगरि २३ मिनट ५५.९५ सेकेन्ड समयका साथ समिरा शोभा थापाले रजत जितिन् ।
कास्य पदक जितेकी श्रेवी महर्जनलले २४ मिनट ०५.७७ सेकेन्ड समय लगाईन् । रजत र कास्य पदक जित्नेले क्रमशः नगद १० र ८ हजार नगद प्राप्त गरे ।
कास्की जिल्लाको लागि मात्र भएको प्रतिस्पर्धामा धनमान गुरुङ्गले २६ मिनट ४८.७४ समयका साथ स्वर्ण पाए । उनले नगद ८ हजार प्राप्त गरे । दोश्रो भएका अर्जून नेपालीले नगद ५ हजार प्राप्त गरे ।
उनले ३० मिनट १८.१० सेकेन्ड समय लगाए । तेश्रो स्थानमा रहेका ठाकुर चौधरीले ३३ मिनट ५६.४९ सेकेन्ड समय लगाए । चौधरीले नगद ३ हजार प्राप्त गरे ।
बिदेशी खेलाडीहरुको प्रतिस्पर्धामा स्पेनका खेलाडीहरुले जित निकाले । गार्सिया डेलगाडो मार्टाले पहिलो स्थान हात पारिन् । उनले २८ मिनट ५१.६० सेकेन्ड समय लगाईन् । दोश्रो स्थानमा मिचेल वेल्चले ३१ मिनट ३६.१० सेकेन्ड समय खर्चिन् ।
यसै गरि अवेरो मारियाले ३५ मिनट २०.०३ सेकेन्ड समयका साथ तेश्रो भईन् । विदेशी खेलाडीहरुले प्रमाण पत्र प्राप्त गरे ।